(1)CD-DVD and Drive Lock v2.9, (2)Xilisoft DVD Creator & Xilisoft DVD Copy Express(3)Easy CD-DA Extractor ကျွန်တော်တို့ CD သီချင်းခွေတွေကို Computer ထဲကို တိုက်ရိုက်ကူးယူလို့မရတာတွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကိုဒီကောင်လေးကနေပြီးအလွယ်ကူဆုံးကူးယူပေးပါတယ်။ ~ ITmanHOME
12:24 CD/DVDကူးမရအောင်|ကူးရအောင်, နည်းပညာ No comments
(1)CD-DVD and Drive Lock v2.9, (2)Xilisoft DVD Creator & Xilisoft DVD Copy Express(3)Easy CD-DA Extractor ကျွန်တော်တို့ CD သီချင်းခွေတွေကို Computer ထဲကို တိုက်ရိုက်ကူးယူလို့မရတာတွေရှိပါတယ်။အဲ့ဒါကိုဒီကောင်လေးကနေပြီးအလွယ်ကူဆုံးကူးယူပေးပါတယ်။
CD-DVD and Drive Lock v2.9
ကျွန်တော်အခု CD-DVD Lock ချတဲ့ကောင်လေးတစ်ခုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ CD-DVD တင်မဟုတ်ပါဘူး။ ကျန်တဲ့ Drive လေးတွေကိုလည်း မိမိတို့ နှစ်သက်သလို Lock ချပေးနိုင်ပါတယ်။ ကျွန်တော် KEY လေးပါထည့် ပေးထားပါတယ်။ ပေါ့ပေါ့ပါးပါး နဲ့ အသုံးပြုလိုသူများအတွက် အဆင်ပြေပါတယ်။ ဖိုင်ဆိုဒ်က လည်း 1 MB ပဲရှိပါတယ်. အောက်မှာ ယူသွားလိုက်ပါဗျာ။
ကျွန်တော်အောက်မှာ နှစ်နေရာခွဲတင်ပေးထားပါတယ်. အဆင်ပြေမယ့်လင့်ခ်လေးကနေသာ ယူသွားလိုက်ပါ ဗျာ။
ကျွန်တော်အခု Xilisoft DVD Creator နဲ့ Xilisoft DVD Copy Express လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။
တောင်းထားလေးရှိတာရယ် ၊လိုအပ်တဲ့ သူတွေလဲယူလို့ရအောင် တင်ပေးလိုက်တာပါ။ ကျွန်တော်တို့
ဒီကောင်လေးကတော့ ကျွန်တော်တို့ ပြောင်းလဲချင်တဲ့ Video Format အတိုင်း AVI, MPEG, DivX, DV,
VOB, WMV စတဲ့ဖိုင်အမျိုးအစားလေးတွေကို DVD movie, DVD folder ဒါမှမဟုတ် ISO files အနေနဲ့
အလွယ်ကူဆုံးနဲ့ အလျင်မြန်ဆုံးဖြစ်အောင်ပြောင်းပေးနိုင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ DVD အခွေလေးတွေရဲ့
MENU လေးတွေကိုလည်း မိမိတို့စိတ်ကြိုက်ပြောင်းလဲပေးနိုင်ပါတယ်။နောက်ခံ Background လေးတွေ
ကိုလည်းမိမိတို့စိတ်ကြိုက်ပြောင်းလဲပေးနိုင်သလို၊အဲ့ဒီ Background လေးတွေရဲ့သီချင်းသံလေးတွေကို
လည်းမိမိတို့စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်လို့ရပါတယ်။ဒါ့အပြင် video effect လေးတွေကိုလည်းပြောင်းလဲပေးနိုင်ခြင်း၊
frame size လေးတွေကိုလည်းပြောင်းလဲပေးနိုင်ခြင်း၊subtitles လေးတွေလည်းထည့်သွင်းပေးနိုင်ခြင်းစတဲ့
RUN ရတာလည်းလွယ်ကူပါတယ်။ဖိုင်ဆိုဒ်ကလေးကလည်း 48.5 MB ပဲရှိပါတယ်။
ပထမအနေနဲ့ Setup ဖိုင်လေးကိုစပြီး RUN ပါမယ်။ ကျွန်တော်ပုံလေးမှာပြထားတဲ့အတိုင်းပါပဲ။
ဒီကောင်လေးတွေကိုနှိပ်မယ်ဆိုရင် Serial keys လေးတွေထည့်ထားတဲ့ Notepad လေးတွေထွက်လာ
အခုလိုထည့်ပေးလိုက်ရင် Full version လေးသုံးလို့ရပါပြီ။
DVD creater ရော DVD copy ရော နှစ်မျိုးစလုံး အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။နှစ်မျိုးစလုံးကလည်းအသုံးပြု
ကျွန်တော်အခု CD-DA Extractor လေးတစ်ခုတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။အလွယ်ကူဆုံးပြောရမယ်ဆို
ရင်တော့ ကျွန်တော်တို့ CD သီချင်းခွေတွေကို Computer ထဲကို တိုက်ရိုက်ကူးယူလို့မရတာတွေရှိပါ
တယ်။အဲ့ဒါကိုဒီကောင်လေးကနေပြီးအလွယ်ကူဆုံးကူးယူပေးပါတယ်။Crack ဖိုင်လေးကို Install လုပ်
ထားတဲ့ Folder လေးထဲကိုကူးထည့်လိုက်ရင် ရပါပြီ။ပေါ့ပေါ့ပါးပါးနဲ့သုံးရတာလည်းအဆင်ပြေပါတယ်။
ကျန်တဲ့ Features တွေလည်းတော်တော်များများပါပါသေးတယ်။သုံးကြည့်လိုက်ပါဗျာ။
ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ 11.2 MB ပဲရှိပါတယ်။ကျွန်တော်နှစ်နေရာခွဲတင်ပေးထားပါတယ်။အဆင်ပြေမယ့်လင့်ခ်
special credit http://www.nayminmaung.info/2011/07/easy-cd-da-extractor.html